IBSA GADDAA ABO – Adda Bilisummaa Oromoo
gudda guddaan nutti dhagahamuu ibsina. Jaal Dheengeen Jimaata barii gaafa Waxabajjii 25, 2021
kkii gaarii tahan keessaa tokko ture. Loltummaa fi dabballummaan qooda dinqisiisaa kennaa ture. Bara
1998 keessa miseensa Gumii Sabaa ABO tahee filame,
Amanamummaa kaayyoo fi si’aa’ina hojii agarsiiseen kabajaa fi jaalala waan horateef 2017 keessa Kora
Sabaa 4ffaa irratti miseensummaa Koree Hojii Geggeesituu ABOtti filamee hanga guyyaa
boqotuutti kenninsaa fi murannoo cimaan qooda isaa kenneera. Gaafatamaa Hojii Hariiroo Alaa